Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Uluvo lwakho ngoNyulo oluzayo lwe-UNWTO luceliwe
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • I-WTN
Ilizwe elinye kufuneka linyuke kwi-UNWTO General Assembly ezayo ukucela ivoti eyimfihlo. Nasi isizathu:
Eyona nkokeli iphikisanayo yeWorld Tourism Organisation (UNWTO), uNobhala-Jikelele I-Zurab Pololikashvili idinga isibini kwisithathu samazwe angamalungu kwiNdibano Jikelele ezayo eMadrid ukuba iphinde iqinisekiswe enye iminyaka eyi-4.
Kuthatha amazwe angama-53 ukukhaba isihlandlo sakhe sesibini.
Ilizwe elinye kufuneka licele ivoti yokuqinisekisa kwakhona eyimfihlo kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo ukwenza le nkqubo ibe nobulungisa ngakumbi.
Ngaba uZurab Pololikashvili kufuneka aphinde aqinisekiswe? Cofa apha
Ukulahlwa koko ebesakuba nguNobhala Jikelele babini UFrancesco Frangialli kunye noTaleb Rifai phakathi ngokwemithombo eTN kwakhona ilizwe host Spain, kunye namanye amazwe aliqela sinethemba.
Ukongeza, kukho inkxalabo yangaphakathi malunga nokukhukuliseka kokuziphatha kombutho, njengoko kuchazwe liGosa leeNqobo zokuziphatha le-UNWTO kwingxelo yakhe kwi-General-assembly. Kukwakho inkxalabo ekhulayo malunga neendlela ezingafihlwayo zikaNobhala-Jikelele okhoyo ngoku kulawulo lweMicimbi yaBasebenzi kunye nemiyalelo yokwenziwa komsebenzi.
I-UNWTO ngoku inamazwe angamalungu ali-159. NgokweSiqendu 22 seMithetho yombutho, “unobhala jikelele uya kutyunjwa ngu-a isibini kwisithathu uninzi lwamalungu apheleleyo akhoyo kwaye avota kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo.”
Oku kuthetha ukuba naliphi na ilizwe elityhalela ukungamkelwa kukanobhala-jikelele wangoku, liza kufuna iivoti ezingezizo ezingama-53 kuPololikashvili ukuvimba ukunyulwa kwakhe kwakhona ukuba onke amazwe angamalungu akhona.
Ukwaliwa akuzange kwenzeke kwimbali ye-UNWTO, kodwa ngokutsho komthombo ekuthethwe ngawo ngu eTurboNews owazi ngokugqibeleleyo indlela intlangano esebenza ngayo, “iimeko zangoku zikhetheke kakhulu.”
UZurab Pololikashvili waphinda wanyulwa yikomiti elawulayo yakutshanje ngoJanuwari 2021 kwixesha le-2022-2025. Le komiti idibene ngeyoMqungu, nangona ixesha eliqhelekileyo bekufanele ukuba nguMeyi
Ingxelo ebanzi kwiphephancwadi lesiFrentshi I-Espaces , inikwe isihloko
"IWorld Tourism Organisation, ngaba ilungele nantoni na?"
kwaye yapapashwa ngoSeptemba odlulileyo, yaqinisekisa umxholo apho ukunyulwa kwakhona kwePololikashvili yiBhunga eliLawulayo lenzeke ngoJanuwari 2021 okokuqala epapashwe ngu. eTurboNews.
Imigaqo ye-UNWTO ibonelela ukuba unyulo lukaNobhala-Jikelele kufuneka luhlale lwenzeka kwikomkhulu le-UNWTO eMadrid. Ngokwale ngxelo, ibhunga ligqibe kwelokuba luqhubele phambili unyulo lukanobhala jikelele kwinyanga yoMqungu, ukuze lungqamane nomboniso worhwebo weFITUR. Oku kwagqitywa kwiseshoni yangaphambili yebhunga lesigqeba eGeorgia, ilizwe lasekhaya likaNobhala-Jikelele. Ukuba nentlanganiso yebhunga lesigqeba eGeorgia kwaphakamisa amashiya amaninzi.
I-FITUR nangona kunjalo ayizange yenzeke ngoJanuwari, kodwa ngoMeyi, ngoko ingxabano ye-SG ukuhambisa ukhetho lwakhe ngoJanuwari yayingenanto. Nangona kunjalo intlanganiso kaJanuwari ngexesha lokuvalwa kwe-COVID-19 yayiluncedo olucacileyo kuye, ngoko ke wala ukuhlengahlengisa umhla.
Wade wancama ukuhlengahlengisa umhla emva kweenkokeli zangaphambili ze-UNWTO UFrancesco Frangialli kunye noTaleb Rifai ingenise ileta evulekileyo ngenkqubo yobhengezo yenkqubo entsha esekiweyo Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi.
Iingxoxo zabo babini babesakuba ngoonobhala jikelele zazikukhumbuza oko olu lonyulo belusoloko lusenzeka entwasahlobo, ukuvumela iOfisi kaNobhala kunye neSigqeba esiLawulayo ukuba ziphumeze uhlahlo lwabiwo-mali lonyaka olandelayo, kulindelwe ukuba iNdibano yeZizwe eziManyeneyo ibanjwe ekwindla.
UFrangialli kunye noRifai baxoxa ukuba unyulo lufuna intlanganiso kumntu kwaye hayi eyenyani.
Imithetho nemimiselo elawula inkqubo yonyulo ithetha i ukubaluleka komgaqo wokuvota okuyimfihlo, into ekuya kuba nzima kakhulu ukuyilungiselela kwintlanganiso ebonakalayo.”
Bachaza ukuba abaphathiswa abazukuya eMadrid, ngakumbi ngexesha lobhubhani. Amazwe ebeza kuthembela ngoonozakuzaku bawo endaweni yabaphathiswa bezokhenketho ukuba bamele ilizwe labo kunyulo. Ngelishwa, le nto yayilindelwe nguZurab kwaye yenzeka ngokwenene. Oku kwakungafanelekanga ngokukodwa kumazwe angamalungu ngaphandle kommeli eMadrid. Oku kukodwa, kunye nexesha elifinyeziweyo lokuba abo bangabagqatswa abatsha beze ngaphambili, ibeke esichengeni isidima solonyulo.
Umlo wawuqalile phakathi kukaZurab Pololikashvili, umgqatswa wokuphinda kunyulwe, kunye noShaika Mai bint Mohamed al Khalifa, ilungu lentsapho yasebukhosini yaseBahrain kunye noMphathiswa weNkcubeko yelo lizwe phakathi kwe-2010 kunye ne-2014, owayekuphela kwabagqatswa abayi-6. uyakwazi ukungenisa amaphepha akhe okutyumba kwangexesha nangokuchanekileyo.
Unyulo lwe-UNWTO lubulale nje nasiphi na isimilo esisele kwiNkqubo ye-UN
Imithombo ekufutshane ne-UNWTO ibonise ngokuphindaphindiweyo "izitenxo ezinzulu" kunyulo lonobhala-jikelele wangoku.
eTurboNews ingxelo malunga negqwetha elabhala imithetho kamasipala ye-UNWTO. Wayecinga ukuba unyulo luka-2017 lukaNobhala-Jikelele lufanele lubhengezwe njengento engekho mthethweni.
Ukuqeshwa koMlawuli oPhetheyo
Kukho inkxalabo yangaphakathi malunga nokukhukuliseka kokuziphatha kwe-UNWTO ukuya kwinqanaba lokuba iGosa lokuziphatha lombutho, uMarina Diotallevi ukhankanye kwiNgxelo yoMsebenzi woLuntu okhokelela kwiNdibano Jikelele eMadrid. Uthetha "ngokukhula kwenkxalabo kunye nosizi lokuba izenzo zangaphakathi ezicacileyo ezazikho kulawulo lwangaphambili lwe-UNWTO, phakathi kwezinye izinto, malunga nokunyuswa, ukuhlelwa ngokutsha kwezikhundla kunye nokuqeshwa, kuphazamiseke ngequbuliso, kushiya indawo enkulu yokungafihli kunye nolawulo olungenasizathu ".
Enyanisweni, kule veki, i-Spanish Magazine HOSTELTUR ifunde ukuba unobhala-jikelele umisele uZoritsa Urosevic njengomlawuli olawulayo we-UNWTO. Esi sikhundla eneneni simenza inani lesithathu, emva kokuba unobhala-jikelele kunye nomnye umlawuli olawulayo, u-Zhu Shanzhong waseTshayina. Ulo nyulo luza kuqalisa nge-19 kaOktobha.
IBhunga eliLawulayo lokugqibela labanjwa ngoJanuwari walo nyaka eMadrid, kwaye kwakungekho nqaku le-ajenda malunga noku kuqeshwa.
Umlawuli olawulayo, isikhundla sokuba kude kube ngoku yayiyipolitiki, nguye ngoku olawula amasebe eeNdlela zokuziphatha, ezeNkcubeko kunye noXanduva lweNtlalo; Ukuveliswa kwezinto ezintsha, iMfundo kunye noTyalo-mali; Iinkcukacha-manani; Uphuhliso oluZinzileyo kunye nobukrelekrele kunye noKhuphiswano lweMarike yabakhenkethi.
IHOSteli Kwakhona wafunda ukuba 200,000 Euro evunyiweyo ukuba “isebenzela ukuphucula amaziko ekomkhulu”, yayichithelwe ngokukodwa ekuphuculeni i-ofisi kanobhala-jikelele. Lo msebenzi wenziwa ngaphandle kwethenda yoluntu njengoko kufunwa yimithetho ye-UNWTO.
Ukongeza, ngokwemithombo, abasebenzi be-Secretariat General bayaqhubeka besebenza ngomnxeba kwaye baya kwenza oko ubuncinci de kube sekupheleni konyaka, njengoko bekucwangcisiwe.
eTurboNews ngoku ibuza abafundi:
Ngaba uZurab Pololikashvili kufuneka aphinde aqinisekiswe okwesibini njengoNobhala-Jikelele we-UNWTO?